"Nidaamka ayaa ku fashilmay (...) U sheeg Paul Biya" - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA "Nidaamka ayaa ku fashilmay (...) U sheeg Paul Biya"
Sannad ka dib markii ay sii daayo ee Jeune Afrique, halkaas oo uu si xoogan u dhaleeceeyay maamulka xiisadda tiisa xeradiisa, oo ay ku jiraan Paul Biya, Fon Victor Mukete, xubinta ugu da'da weyn ee Senate Anglophone, oo loo doortay xubin buuxda ka ah Guddiga Dhexe ee CPDM ah, hadiyado waqtigan ka hor wasiirrada ee golaha guurtida.
Fund Mukete iyo Paul Biya - DR
Maalintan Jimcaha, 5 April April 2019, munaasabadda shirwaynaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka, ayaa Senate-kii ugu da'da weynaa ee ka soo baxday xayiraad oo aan ku farxin dawladda.
Isagoo kaashanaya wasiirrada Fon Mukete ayaa ku soo laabtay dhibaatada Anglophone ee aagga Ingiriiska ku hadla. Nidaamka wuxuu ku fashilmay xallinta khilaafkan, isaga oo kordhiyay mudnaanta nidaamka federaalka, isaga oo dalbaday dareenka dadweynaha ee gobollada Waqooyi-Galbeed iyo Koonfur-galbeed.
"Nidaamka ayaa ku fashilmay, federaalku waa habka keliya. Tobanaan dawladood oo Federaal ah, si gobol kastaa u maamuli karto arrimihiisa. Maxay dadka uga cabsanayaan federaalka? Anigu ma hadlayo si dalku u kala qaybsanaado. No! Waxaan la diriray aad u adag oo ah midaynta reer Cameroons Southern hore iyo Republic hore ee Cameroon. Oo weligay ma aan eryi doono. Laakiin waddanku waa inuu noqdaa mid federaal ah. Fiiri America, Koonfur Afrika, Switzerland, Nigeria, Canada, Belgium, Germany, Mexico, Russia iyo Rwanda ", rajeeyay in ay tilmaan u dhaqdhaqaaqa ee Rally Dimuqraadiga Shacabka Cameroon ( CPDM), xisbigii awoodda iyo Bafaw ee Gréé, gobolka Koonfur Galbeed, ayaa sheegay in Cameroon-Info.
"Waa maxay micnaheedu yahay wax micno leh? Dadkaygu way dhimanayaan, way xanuunsadeen, waxaanu ku ciyaarnaa Yaounde. Waa inaan taxadarnaa. Kama daryeelo. Tag qof kasta. Tag Paul (Biya Ed) oo meel walba ii soo qaado, "ayuu yiri.
Tan iyo bilawgii xiisaddan, mawaaqiftu lama mid ahaeyn maaraynta dhibaatada Anglophone iyo xalalka la soo jeediyay. Wareysi dhowaan ka soo yeeray Victor Mukete, oo ah hoggaamiyaha ugu sarreeya ee Bafaw, ee Jeune Afrique, oo fadhigeedu yahay Paris, ayaa horay u shaaciyey kala-shaandhayntii ugu saraysay gobolka.
At Jeune Afrique bishii Febraayo 2018, madaxa sare ee 100, ayaa cambaareeyay madaxweynaha Cameroon in uu yahay "aan la heli karin". Wuxuu cambaareeyay xayiraadda Anglophones, "kuwa haysta kaliya 10 wasiirada 60 ee dawladda."
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/actu/politique/1107303-crise-anglophone-le-doyen-du-senat-en-colere-contre-le-gouvernement-le-systeme-a-echoue-allez-dire-a-paul-biya
Markii ay ka badbaaday xasuuqii Tutsi waxaa canshuuray Faransiiska si ay u noqdaan "raajicda adeegyada sirdoonka Rwanda" - JeuneAfrique.com
ASTUCES : 34 HACKS DE VIE POUR FIXER VOS DÉCISIONS MAUVAISES
Paris Saint-Germain ayaa qatar ku jirta, Barça ayaa weli ku dhibtooneysa suuqa kala iibsiga - FOOT 01